अनलाइन प्रविधिले महिलामा यस्तो यौन चाहना विकसित गर्दै | Rajmarga
अनलाइन प्रविधिले महिलामा यस्तो यौन चाहना विकसित गर्दै
डिजिटल प्रविधिको सहयोगमा अब पहिलाको तुलनामा धेरै महिला अनलाइन पोर्नोग्राफी हेरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरु आफ्नो कामुकता खोज्ने र अरुका साथमा नयाँ यौन व्यवहार र सेक्शुअल टोयजको प्रयोगजस्ता विषयमा छलफल गर्नका लागि सहयोग पुगेको छ।
क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ वाटरलुका शोधकर्ताहरुका अनुसार निजी कम्प्युटर र स्मार्टफोनले महिलाहरुका लागि सेक्शुअल सामग्री खोज्न अरु आरामदायी बनाइदिएको छ। जुन पारम्पारिक तरिकाबाट उनीहरुका लागि कम आरामदायी थियो ।
शोधकी सहलेखिका डायना पेरीले भनिन्–हामी वर्तमान शोधबाट यो कुरा थाहा पाउँछौ कि अनलाइन पोर्नोग्राफी हेर्ने मानिसहरु सबैभन्दा तिब्रताका साथ बढ्ने समूहका रुपमा महिलाहरु सबैभन्दा अगाडि छन् । र, यो शोधबाट हामी यो बुझ्न चाहन्छौ कि उनीहरुले यसो गर्नुको प्रमुख कारण के हो ?
शोधअन्तर्गत विभिन्न लैंगिक पहिचान भएका महिलाहरुको समूहका साथ छलफल गरियो, जसले अनलाइन सेक्शुअल सामग्री हेर्ने गरेका थिए । शोधकर्ताहरुले पाए कि डिजिटल प्रविधिले उनीहरुको यौन रुझानसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नका लागि सहयोग पुगेको छ ।
पेरी भन्छिन्–यो स्पष्ट छ कि प्रौद्योगिकीले महिलाहरुलाई आफ्नो शर्तमा पोर्नोग्राफी हेर्ने र आफ्नो कामुकताको पक्षहरु खोज्न सक्षम बनाएको छ, जुन उनीहरुका लागि नयाँ हो ।
शोधकर्ताहरुले भनेका छन्–यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि समाजमा महिलाहरुको कामुकतालाई लिएर अहिले पनि रुढीवादी विचारधारा व्याप्त छ र यस्तो विचारधारामा पुरुषको आवश्यकता र इच्छाहरु बढी स्वीकार्य छ । एजेन्सी
Previous post: कुवेतमा अवैधानिक रुपमा रहेकाहरुलाई आममाफी दिइने, सक्दो शेयर गरेर नेपालीमाझ जानकारी दिऔं
Next post: तपाईलाई थाहा छ ? यस्तो रहेछ हस्तमैथुनको इतिहास
महिला कण्डमको प्रयोग कसरी गर्ने ? हेर्नुहोस भिडियो
राशि अनुसार थाहा पाउनुहोस् आफ्नो प्रेमका बारेमा, कुन राशिका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो ?
यस्ता छन् नियमित यौन सम्पर्कबाट हुने फाइदाहरु
कसरी आनन्दसँग सम्पर्क गर्ने ?
थोरै मानिसमा मात्र हुने विशेष पाँच शारीरिक क्षमता यस्ता छन्